फेरी अर्का चर्चित गायिकाले पनि छोडिन् संसार, सांगितिक क्षेत्रमा ठूलो क्षती – Classic Khabar
May 30, 2021 220
संक्रमित भएर उपचारार्थ रहेकी गायिका लासिमित राईको निधन भएको छ । संगीतकार आनन्द राईले सामाजिक संजाल मार्फत उनको निधनवारे सार्वजनिक गरेका छन् । राईको श्रीमानको पनि केही समय अघि मात्र निधन भएको थियो ।
‘लब्ध प्रतिष्ठित गायिका आदरणीय लासिमित राई लेप्चा दिदीको असामयिक मृत्युको दुःखद खबरले मन भावह्विवल भएको छ । पीडाको वोध भएको छ’ आनन्दले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ‘केही महिनाअघि मात्रै भिनाजु बित्नु भएको खबरले आश्चर्यमय परेको थिएँ । त्यसपछि एकचोटि मात्रै कुरा हुन सक्यो । त्यो नै अन्तिम कुराकानी भयो ।’
गायक अशोक मुकारुङले गायिका राईको निधन को रो नाका कारण भएको बताएका छन् । ‘नआउ सपना भरी’, ‘तिमीले दिएका वेदना’, ‘टुटेका मन’, ‘सधैँ भरी’, ‘कहिले हराउँदै’, ‘म मैना सरी’, ‘सुन कोशीको सङ्लो पानी’, ‘झारेको आँशु’, ‘तिम्रो माया’, ‘साउने भेलले’लगायतका गीतहरु गायिका लासिमितका लोकप्रिय छन् । यी बाहेक उनका थुप्र गीत सांगीतिक बजारमा आएका छन् ।
गायक अशोक मुकारुङले सोसल मिडिया फेसबुकमार्फत् गायिका राईको कोरोनाका कारण निधन भएको जानकारी गराएका हुन् । गायक मुकारुङले गायिका राईको निधनप्रति श्रद्धाञ्जलि ब्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘एउटा विशाल आवाजको अन्त्य बहुचर्चित गायिका लासिमित राई दिदीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि, हजुरको बैकुन्ठमा बास होस् ।’
गायिका राईको नआउ सपना भरी, तिमीले दिएका बेदना, टुटेका मन, सधैँ भरी, कहिले हराउँदै, म मैनासरी, सुन कोशीको साङ्लो पानी, झारेको आँशु, तिम्रो माया, साउने भेलले’लगायतका गीतहरुपनि चर्चित छन् ।
Prevजब बाजुराकी एक महिलाले आफ्ना श्रीमानको मृत्युको खबर सुनेपछी जे गरिन त्यसले सबैलाई अचम्म बनायो !
Nextअलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेकेहि समयपछी (भिडियो)